बार्सिलोनाबाट बाहिरिएका मेस्सीको अबको यात्रा कता ? यी हुन् सम्भावित क्लब - टि. एल. एन पोस्ट
Home खेलकुद बार्सिलोनाबाट बाहिरिएका मेस्सीको अबको यात्रा कता ? यी हुन् सम्भावित क्लब
अर्जेन्टिनी स्टार लियोनल मेस्सी स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाबाट बाहिरिएका छन् । १३ वर्षको उमेरमा बार्सिलोना पुगेका मेस्सीले आधिकारिक रुपमा बार्सिलोनाबाट बाहिरिएका हुन् ।
यो जुन महिना सकिएसँगै बार्सिलोनासँग पहिलो करार गरेको ७५०४ दिनपछि मेस्सी ुफ्री एजेन्टु बनेका थिए । २०२१र२०२२ का सिजनका लागि अर्को क्लबको टुंगो नलागेसम्म मेस्सी फ्रि एजेन्टकै रुपमा रहनेछन् ।
बार्सिलोनासँग मेस्सीको सम्झौता सकिनासाथ पीएसजीले मेस्सीसँग सम्पर्क गरेर कुराकानी गरेको थियो । तर, त्यतिबेला मेस्सीले आफू बार्सामै रहने मनशाय व्यक्त गरेका थिए । उनले आफू अहिले कोपा अमेरिकामा केन्द्रित रहेको भन्दै कुनै पनि छलफल अघि बढाएनन् ।
तर, यो सिजन च्याम्पियन्स लिग जित्ने लक्ष्य बोकेको पीएसजीले मेस्सी भित्र्याउन पहल गर्दैछ । पीएसजीले आफूलाई च्याम्पियन्स लिग जित्न मेस्सीको आवश्यकता महशुस गरिसकेको छ । अब मेस्सीले पनि इच्छा देखाए आगामी दिनमा मेस्सीलाई फ्रान्समा देख्न सकिने छ ।
यदि उनी पीएसजी गएको खण्डमा नेयमार र एम्बापपेसँग उनको साझेदारी बन्नेछ । मेस्सी र नेयमार पूराना साथी पनि हुन् । यी दुईको सम्बन्ध मैदानबाहिर पनि उत्तिकै सुमधुर छ ।
म्यानचेस्टर सिटी आर्थिक रुपमा बलियो क्लब हो । म्यान सिटी मेस्सीलाई प्रिमियर लिगमा भित्र्याउने हैसियत राख्ने मुख्य क्लब हो ।
ज्याक ग्रिलिसलाई बिहिबार एस्टन भिल्लाबाट १ सय मिलियन पाउण्डमा अनुबन्ध गरेको सिटीले इंग्ल्यान्डका कप्तान ह्यारी केन भित्र्याउन कसरत गरिराखेको छ । केनलाई क्लबमा अनुबन्ध गराउन टोट्यानहमले १५० मिलियन पाउण्ड माग गरेको छ ।
यी बाहेक केही अमेरिकी क्लबले पनि मेस्सीलाई भित्र्याउन चाहेका छन् । तर, मेस्सी भने युरोपमै बस्न चाहेका छन् ।
उनले आफ्नो ‘चाइल्ड क्लब’ नेवेल्स ओल्ड ब्वाइज पनि जान चाहेका छन् । करियरको अन्त्यमा बाल्यकालमा आफूले खेलेको क्लब नेवेल्स ओल्ड ब्वाइजमा फर्किने बताएका मेस्सी अहिले नै नै अर्जेन्टिना फर्कने सम्भावना भने छैन । तर, उनले कुनै समय नेवेल्स ओल्ड ब्वाइजबाट भने खेलेको देख्न पाईने छ ।
Previous articleयस्तो छ सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
Next articleदुवै डोज खोप लगाउनेलाई इन्फेक्सन हुने खतरा ६० प्रतिशत कम
आज यी ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावाना, यी ठाउँहरुमा सतर्क रहन आग्रह
मेयर बालेनले सार्वजनिक गरे चुनावी खर्च
स्थानीय निर्वाचनका लागि १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी, तलब भत्ता यस्तो